Wasiir katirsan Somaliland oo siwayn loogu soo dhoweeyey Buuhoodle (dhegayso) – Radio Daljir
Febraayo 10, 2018 3:39 g 0
Wasiirka howlaha guud iyo guryaynta ee Somaliland Cabdirashiid Ducaalle Qanbi iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn, halkaasi oo ay kusoo dhoweeyeen masuliiyiinta iyo bulshada magaalada Buuhoodle.
Odayaasha iyo dadwaynihii soo dhoweynayay ayaa sheegay inay ku faraxsanyihiin soo dhowaynta wafdiga wasiirka kasocda Somaliland.
Wasiirka howlaha guud iyo guriyaynta Somaliland Cabdirashiid Ducaalle Qanbi ayaa sheegay xukuumadda madaxwaynaha Somaliland Muuse Biixi inay ka shaqaynayso arimaha horumarinta bulshada Buuhoodle.
Waa wasiirkii ugu horeeyey ee kasocda xukuumadda madaxwaynaha Somaliland Muuse Biixi oo yimaada magaalada Buuhoodle, iyadoona booqashadan ay kusoo beegmayso xilli xiisado u dhaxeeya Puntland iyo Somaliland laga dareemayo deegaano hoostaga tuulada Tukaraq ee gobolka Sool oo ay dhowaan la wareegeen ciidamada Somaliland.
Arday Kaalmaha hore ka galay iskuulka Shaafici Qardho oo abaalmarino la gudoonsiyay (dhegayso)